ဟ = ဟန်ဆောင်တတ်သော အလင်းဆက်တို့သားအမိ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Arts & Humanities » ဟ = ဟန်ဆောင်တတ်သော အလင်းဆက်တို့သားအမိ
Posted by alinsett on Jan 10, 2013 in Arts & Humanities, Creative Writing, Myanmar Gazette | 38 comments
အလင်းဆက် စီးမျောခံစားခဲ့သောအက္ခရာများ အဖြူရောင် ဟန်ဆောင်ခြင်း
ဟန်ဆောင်ခြင်း အဖြစ် ….
ရင်နာစရာကောင်းအောင်…..ပုံစံ ပြောင်းပေးနိင်ပါတယ် ။
လ = လွတ်လပ်ရေး နှင့် ကျွန်တော် လျှောက်သော လမ်း
သ = သူ့ မှာတမ်းနှင့် ကိုယ့်စာအလွမ်း
အက္ခရာတွေနဲ့ခရီးရှည်ကြီး ထွက်ခဲ့တာ…
အခုဆို…….ဟ = အထိ ရောက်ခဲ့ပါပေါ့လား ။
အခုလို…ခရီးရှည်ကြီးတစ်ခု အက္ခရာတွေကို စီးပြီး.ထွက်လာနိုင်တာ…
ကျွန်တော် ခရီးစဉ်တွေကို… အဆက်မအပြတ်..ဖတ်ရှု ခံစားကြသူတွေရော…
ဟ = ဟန်ဆောင်တတ်တဲ့ အလင်းဆက်တို့သားအမိ လို့ … ခေါင်းစဉ်တပ်ပြီး..
အက္ခရာခရီးတစ်ခု… ထွက်ပြပါဦးမယ် ။
သူများအကြောင်း..ပြောရတာထက်… ကိုယ့်အကြောင်း ကိုယ် ပြောရတာက ပို..လိပ်ပြာ လုံလို့ ….
ကိုယ့်အကြောင်းလေးပဲ..စာဖွဲ့ မယ် ။
အထုးသဖြင့်..အခုလို……. အလင်းဆက် နဲ့အလင်းဆက်ရဲ့ မေမေ….
နှစ်ယောက်သား..ကိုယ်စီ..ဟန်ဆောင် ခြင်းကို… ကျကျနန သုံးခဲ့တာတွေ ပြောရမှာ..ဆိုတော့….
ကျွန်တော်..ရင်းနှီး ကျွမ်းဝင်ခဲ့ပါတယ် ။
ဟန်ဆောင်ခြင်းအမျိုးမျိုး… ဟာ..ပုံစံ မျိုးစုံ နဲ့ ကျွန်တော့်ဆီ..ရောက် လာတတ်ပါတယ် ။
ကျွန်တော့်ကို လာ ပြုံးပြကြ….
လာ ပြောကြ သူတွေ…. အများကြီးပါ ။
ရှေ့ မှာ.လည်း.အများကြီး…ကြုံရဦးမယ်..ထင်တယ် ။
ဟန်ဆောင်ခြင်းဟာ…. မကောင်းတဲ့ အရာတစ်ခုလို့ ….ယေဘုယျ လက်ခံရမှာဆိုပေမယ့်….
ရင်နာနာနဲ့ …. လက်ခံယူ ရတဲ့ …. အဖြူရောင် ဟန်ဆောင်ခြင်းတွေလည်း.ရှိနေပါတယ် ။
ဖြူစင်မြင့်မြတ်တဲ့ဟန်ဆောင်ခြင်း..လို့ … ပြောချင်ပါတယ် ။
ကိုယ့် ဆန္ဒ တွေကို..ချုပ်တည်း..ရင်း..ဟန်ဆောင်ရတဲ့ အဖြစ်တွေ..ရှိပါတယ် ။
ဟိုတလောက… မေမေ့ ဟန်ဆောင်ခြင်းကို…. မျက်ဝါးထင်ထင်..တွေ့ လိုက်ရတဲ့ အခါ………………..
မေမေ နဲ့ … သားကလေး…
ဒံပေါက်ထမင်း ၀ယ် လာတယ် ။
ဒါပေမယ့် သားသမီးလေးယောက်နဲ့ …. ဖေဖေ မေမေ အပါအ၀င်… ခြောက်ယောက်ရှိတဲ့မိသားစု အတွက်….
မေမေ ၀ယ်လာတာက ဒံပေါက်ထမင်း သုံး ပွဲ ပါပဲ ။
( ဒံပေါက်ကလည်း……အခုတလော ဈေးတွေ ကြီးလာလိုက်တာနော် ။
တစ်ပွဲ 1700 ကျပ် …တဲ့။ အခြေခံအလုပ်သမားတစ်ယောက် တစ်နေ့စာ လုပ်အားခ..လောက်ပေးရတယ် ။
ဒီအတိုင်းဆို ဆင်းရဲသားတွေ ဒံပေါက် ၀ယ် စားနိုင်ဖို့ .. တော်တော်..ဝေးနေပြီ ။ )
ဒါဖြင့်…. တစ်ပွဲကို… နှစ်ယောက်နှုန်းနဲ့စားရမယ်ပေါ့ ။
ဖေဖေကလွဲရင်..ကျန်တဲ့မိသားစုဝင် အကုန်လုံး ဒံပေါက် ဆို သိပ်ကြိုက်ကြတာ…။
ဒံပေါက် တစ်ပွဲလောက် ( နည်းနည်းလေး ပါတာလေးများ.) ပြိုက်ခနဲတောင် ကုန်ုသွား ဦးမယ် ။
မေမေ ကိုယ်တိုင်လည်း..ဒံပေါက်ဆို အရမ်းကြိုက်တာ ကျွန်တော်..သိ နေတာပဲ. ။
အဲဒီနေ့ က…… သုံးပွဲ တည်း…၀ယ်လာတာ…လည်း…
အပို ထပ် ၀ယ်စရာ….ပိုက်ဆံ အလုံအလောက် မရှိတော့လို့ …ဆိုတာလည်း.ကျွန်တော်..သိတာပေါ့ ။
မေမေ ဒံပေါက် အရမ်းကြိုက်တာ..သိနေတဲ့ကျွန်တော်..အရမ်း အံ့သြ သွားရတယ် ။
မေမေ..အဲဒီနေ့ က…. ဒံပေါက်ထမင်းကို မစားဘူး ။
“ ရင်ပြည့်ရင်ကယ်..ဖြစ်နေသလားမသိပါဘူး…သားတို့ ရယ်….။ အမေ..မစားချင်ဘူး… ”
အဲဒီ စကား ဟာ… မစားချင် ဟန်..ဆောင် ထားတဲ့ စကားမှန်း..
ကျွန်တော်… ရိပ်မိတာပေါ့ ။
အမေ့သားပဲ.. ၊ ကျွန်တော်… လူကဲခတ် တော်ပါတယ် ။
ကျွန်တော် တို့ … များများ စားရအောင်…..
မလောက်မင မဖြစ်ရလေအောင်…. စားချင်လျက်နဲ့ …. မစားချင် ဟန်..ဆောင် လိုက်တဲ့ …မေမေ့ကို….
ကျွန်တော်…. ချစ်လိုက်တာဗျာ ။
မိခင် စိတ် ဆိုတာကြီးကိုလည်း….. တော်တော်…. လေးစားမြတ်နိုးမိတယ် ။
ကျွန်တော်တို့ … ဘယ်လို ကျွေးကျွေး… မစားတာ….။ “ မစားချင်လို့ပါ..” လို့ ပြောပြီး…..
ကျွန်တော်တို့ … စားသောက်နေတာကို….. ခပ်လှမ်းလှမ်းကနေ..ပြုံးပြီး.ကြည့်နေလိုက်တာများ………
အခု ပြန် မြင်ယောင်ကြည့်ရင်..ကို… ပြန် ငိုချင်လာတယ်ဗျာ ။
မေမေ့ကို ကျွန်တော်..အရမ်းချစ်တာပဲ…ဗျာ… ။
အဲဒီလို ဟန်ဆောင်ခြင်းမျိုးတွေ…တော့…. ထပ် မကြုံချင်ဘူး….မေမေရာ……… လို့ …
ကျွန်တော့် စ်ိတ်ထဲကနေ… အော်ဟစ်နေမိတယ် ။
မေမေ့ ဟန်ဆောင်ခြင်း ဟာ…..
ကျွန်တော့် စိတ်နှလုံးကို… လွှမ်းမိုးနိုင်ခဲ့ပါတယ် ။
လက်ထဲမှာ..ငွေကလေးများရွှင်လာတဲ့ အခါတိုင်း…မေမေနဲ့ … ညီကိုမောင်နှမတွေ..အတွက်…. အစာကောင်းလေးတွေ..၀ယ်လာပြီး..
ကျွေးမွေးရတာကို…. ကျွန်တော်..ကြည်နူးသာယာနေတတ်ခဲ့ပါပြီ ။
တစ်ခါတစ်ရံ ကျွန်တော့်မှာ… ပိုက်ဆံနည်းနေလို့ …..
နည်းနည်းလေးပဲ..၀ယ် နိုင်တဲ့ အခါမျိုးမှာ…. ကျွန်တော်…. ဟန်ဆောင်ရပါတယ်။
စားချင်လျက်နဲ့ ….မစားချင် ဟန်…ဆောင် မိပါတယ် ။
မလောက်င မှာစိုးလို့ပါ ။
မေမေ့ ဟန်ဆောင်ခြင်းကို..ပုံတူကူးပြီး….. ကျွန်တော်..ဟန်ဆောင်ပါတယ် ။
မေမေကတော့..ရိပ်မိ မြဲ..ပါပဲ ။
ကျွန်တော်..စားချင်လျက်နဲ့ဟန်ဆောင်ပြီး..မစားချင်တော့ဘူး..ပြောနေမှန်း.မေမေ ရိပ်မိနေပါလေရော ။
မေမေက ကျွန်တော့် မေမေပဲ…လေ ။ လူကဲခတ် တော်ပြီးသား…. ။
အဲဒီလို ဟန်ဆောင်ခြင်းမျိုးတော့…..ထပ် မကြုံချင်ဘူး…သားလေးရယ်…….လို့ ….
မေမေ့ အတွေးထဲမှာ.အော်ဟစ်နေမှာ သေချာပါတယ်..ဗျာ…။
အဲင်္ဒီလို ဟန်ဆောင်မှုလေးတွေ…… ဟန်ဆောင် ဖြစ်နေတာရဲ့ အကြောင်းရင်းခံကို…ရှာကြည့်ရင်…….
ကျွန်တော်တို့မိသားစု ရဲ့ ဟန်ဆောင်ခြင်း…ဟာ….
ရင်နာစရာကောင်းတဲ့ဟန်ဆောင်ခြင်း………၊
ဟန်ဆောင်သူကို အပြစ် မဆိုသာတဲ့ ဟန်ဆောင်ခြင်း…လို့ … သတ်မှတ် ရင်..ရမယ် ထင်ပါတယ်နော် ။
ဒီလို… လိုချင်လျက်နဲ့ … မလိုချင် ဟန်..ဆောင်လိုက်ရတာ.မျိုး…..
(အဲဒီလို… အဖြူရောင် ဟန်ဆောင်ခြင်းမျိုး ) ထက်…. ပို…ရင်နာစရာကောင်းတဲ့ .. ဟန်ဆောင်ခြင်းတွေ….ရှိနေဦးမှာပါ ။
ဆင်းရဲတဲ့ နိုင်ငံ တစ်ခု အတွင်းက……
ဆင်းရဲသား ပြည်သူပြည်သားတွေ ရဲ့ …လူနေမှု ဘ၀…..
ရင်နာစရာကောင်းတဲ့ … ဟန်ဆောင်ခြင်းတွေ…. ရှိနေဦးမှာပါ ။
ရက်စက်သော… ဟန်ဆောင်ခြင်း……/ ပက်စက်သော… ဟန်ဆောင်ခြင်း……တွေရော…..
မြင့်မြတ်ဖြူစင် ပြီး ရင်နာစရာ ကောင်းသော ဟန်ဆောင်ခြင်းတွေပါ…..
များများစားစား… မရှိစေချင်တော့ပါဘူး ။
ဟန်ဆောင်နေရပြီ…ဆိုကတည်းက……. ပင်ပန်း ဆင်းရဲပါတယ် ။
ဟန်ဆောင်သူ ရဲ့ … ဟန်ဆောင်ခြင်းကို… မြင်တွေ့ ခံစား ရသူဘက်ကလည်း….. ပင်ပန်း ဆင်းရဲ ရတာပါပဲ ။
ကင်းဝေးကြပါစေ..တော့…….. ရယ်..လို့ …….
10 . 1 .2013 .
ကိုယ် ချင်း စာ နာ ခဲ့ ရ ပြီ လေ….
သို့၇ာတွင်..ဆင်းရဲခြင်းကိုခုတုံးလုပ်ပြီး ကလီကမာလိမ်ညာနေကြတဲ့လူတွေ အတွက်ကတော့ ရင်လေးစရာပါပဲနော်။သြော်…ဘ၀ပေးတွေက မတူညီကြတော့ အဆင့်မြင့်ပုံပြင်တွေနားထောင်သိမြင်ရသလို၊အခြေခံပုံပြင်တွေလည်း နားထောင်သိမြင်ကြရတော့တာပေါ့။ လူတိုင်း အလယ်အလတ်တန်းစား ပုံပြင်ထဲ ရောက်ရှိနိုင်ပါစေ။(အဆင့်မြင့်တွေကတော့ ပြန်ဆင်းလို့မဆိုလိုပါ )
ပထမဆုံး..Comment လေးအတွက်..ကျေးကျေးနော် ။
ဠ ..နဲ့ … အ……
ဆက်လက် အာပေးပါဦး ။
လွယ်လွယ်ပဲ.. ဂူးဂဲထဲကနေ..ဗြူးဗြဲပြီး..ရှာဖွေ..တင်လိုက်မိပါတယ် ။
ဆေးခဲကို အုပ်ထားတဲ့ သကြားနဲ့တူတယ်
သူ့ကို အကူအနေနဲ့ သုံးပေးတာပေါ့
သူမပါရင် သိပ် မကြိုက်ကြဘူးလေ
တစ်ခါတစ်လေတော့ ဟန်ဆောင်ခြင်းဟာ ဆင်းရဲလို့ မဟုတ်ပဲ ညှာတာခြင်းကြောင့်လည်း ဟန်ဆောင်ရပါတယ်။
မိသားစုအတွင်း ချစ်ခြင်းမေတ္တာ စာနာစိတ် ညှာတာစိတ်တွေကြောင့် ဟန်ဆောင်ကြတာဟာ ချစ်စရာကောင်းတဲ့အလေ့အကျင့်တစ်ခုပါ …
လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းမှာ စိတ်မပါပဲ ဟန်ဆောင်နေကြတဲ့ ဟန်ဆောင်ခြင်းတွေကတော့ စိတ်ပျက်စရာ …
အလင်းဆက်တို့ မိသားစုက စိတ်ဓာတ်မဆင်းရဲပါဘူး။ ငဲ့ညှာမှု တွေ မေတ္တာတရားတွေ နားလည်မှု တွေ ကြွယ်ဝတဲ့ မိသားစုပါ။
လူချမ်းသာပေမဲ့ စိတ်ဓာတ်ဆင်းရဲ ခေါင်းပါးတဲ့ သူတွေ တပုံကြီး။
မိသားစု ပြင်ပ နေ့စဉ်လူမှုဘ၀မှာ ဆိုရင်တော့ ကျမက ဟန်ဆောင်ကောင်းတဲ့သူတော့ မဟုတ်ဖူး။ စိတ်ထဲမပါတော့တဲ့ အရာပဲ ဖြစ်ဖြစ်လူပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဟက်ဟက်ပက်ပက်ကို ပြောလို့ စိတ်ဝင်စားလို့ မရဘူး။
အားနာတာကိုလည်း နာသင့်မှ နာတတ်တယ်။ လိုအပ်လာရင် ပြောထွက်လိုက်ဖို့ ၀န်မလေးဘူး။
ကျမ ဟန်မဆောင်တတ်လွန်းလို့ ကျမကို ရင်းနှီးသူတယောက်က metaphor ဖွင့်ဖူးတယ်။ ဆတ်ဆတ်ထိမခံတဲ့ ငရုတ်သီးတဲ့ ။ အပြင်က ကြည့်ရင်လည်း အရောင်စူးတယ်။ အတွင်းကို စားကြည့်ရင်လည်း စပ်တယ်တဲ့ ။
အတွင်းအပြင် တထပ်ထဲ ကျတာမို့ အစပ်မကြိုက်တဲ့ လူတွေ ရှောင်လိမ့်မယ်တဲ့လေ ။ သူပြောတဲ့စကား မမှားဘူးဆိုတာ ခုနောက်ပိုင်း ပို ပိုသိလာတယ်။
ဒါပေမဲ့ တခါတရံမှာ အအီပြေအောင်
အချဉ်လေး အစပ်လေးကတော့ စားကို စားမှ လေ ဟုတ်တယ်ဟုတ်
ဆွိ ကတော့ ငရုတ်သီး မပါ ထမင်းမစားတတ်ဘူး။ ဒါကြောင့် ပု ကို အနားခေါ်ထားမယ်။
ဟန်ဆောင်တာကို ယေဘူယျ မကောင်းဘူးလို့ ဆိုကြလည်း၊ အနည်းနဲ့ အများတော့ သုံးနေရတာပဲ။
သူတစ်ပါးကို ငဲ့ညှာစိတ်လေးကတော့ တန်ဖိုးရှိတယ်လို့ထင်ပါတယ်ကွယ်။
ဟိုတုန်းက ဧည့်သည်တွေနဲ့ စားတဲ့အခါ
ဟင်းကောင်း ထမင်းကောင်းမို့ အပြတ်လွေးရမယ်မထင်နဲ့
ဟန်ဆောင်ပြီး အိနြေ္ဒနဲ့စားရတာမို့ အိမ်မှာစားတဲ့
ပို့စ်လေးကိုဖတ်ပြီး ဦးလေးဆက် မေမေကို လေးစားသနားမိတယ်
ဦးလေးလင်းဆက်ကြီးကိုတော့ သနားပေါင်တော် မိန်းမမရသေးဘူး မရသေးဘူးနဲ့ အော်နေတာလည်း ဟန်ဆောင်နေတာဘဲ မို့လား :harr:
အမေနဲ့သားတို့ရဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေကို တွေ့မြင်ခဲ့ရတာပဲလေ
ကျုပ်ဘ၀မှာ တသက်လုံး နေ့စဉ်မပြတ်သုံးစွဲလာတဲ့ ပရိယါယ်တမျိုးပေါ့……
တကယ့်ကျုပ်အစစ်ကို တနေ့မှ ပြန်ရှာရဦးမယ်……။
ဟန်ဆောင်တယ်ဆိုတာ မကောင်းဘူးလို့ သတ်မှတ်ထားတာကို အမြင်တမျိုးပြောင်းအောင် ဖွဲ့ဆိုလိုက်နိုင်ပါပေတယ်။
အ= အလင်းဆက် နီးလာပြီနော်။
မိသားစုတစ်စုမှာရှိတဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတရားက ပေါက်ဖွားလာတဲ့ ဟန်ဆောင်မှုကတော့ ဖြူစင်ရိုးသားပြီး ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ဟန်ဆောင်မှုပါပဲ။
အပြစ်မရှိဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။ဆင်းရဲချမ်းသာရယ်လို့ မဆိုလိုပါဘူး။
လောက၀တ်အရ ။ ဟန်ဆောင်မှုတွေ ။ နေရာတိုင်းမှာ ။ မကင်းနိုင်ကြတာက
သိကြားမင်းကြိးရဲ့ဒဿန ကလည်း.တယ်ဟုတ်…။
ညှာတာ ခြင်းကြောင့်းလည်း.. ဟန်ဆောင်ရတယ်
အန်တီရေ… အရောက်လာ ..ခံစား..အားပေးလို့ကျေးဇူး…ဗျ ။
လုပ်ငန်းခွင် အတွင်းက ..ဟန်ဆေင်ခြင်းတချို့ တော့…
တစ်ခါတစ်ခါ..ဆို… လူတွေ..နဲ့ ဝေးေ..ဝေး…ဝေးတဲ့ နယ်မြေ…..လို့ .ေ.အာ် ဟစ် ဆိုညည်းမိတဲ့ အထိ…
အန်တီ pooch ရေ..
တစ်ခါတစ်ခါ..အီတာလေးပြေ အောင်…အချဉ်အစပ်လေး စားပေးရတာ..
အဆက်မပြတ် အားပေးနေလို့..ကျေးဇူးအထူး..နော့် ။
ဆုပေးပွဲ နေ့ ကျရင်..မုန့်ကျွေးမယ်. ။
အဲဒီက.ကျွေးတဲ့ ..အစားအသောက်ပေါ့ .
မိန်းမမရသေးဘူး မရသေးဘူးနဲ့ အော်နေတာလည်း ဟန်ဆောင်နေတာဘဲ မို့လား …
ခံစား အာေးပးလို့ … ခင်မင်လေးစားစွာ..ကျေးဇူးတင်လျက်ပါ..လို့ ။
ငါ…. ပြန်ရှာတွေ့ ပြီး….အဲဒီငါ..ကိုပဲ….ပြန်..ချစ်ခင် တွယ်တာသွားလိုက်နဲ့ ….
အ =…. တော့ နိးလာပြီ ။
ကြားမှာ…. ခက်ခဲစွာ ဖြတ်ကျော်ရမယ့်….
အက္ခရာ ကြီး တစ်လုံးရှိနေတယ် ။
ဠ = ? ????/
ရွှေတိဂုံဘုရားမှာ လာနားတဲ့ ငှက်တွေ အကြောင်း ရေးလိုက်ပေါ့ကွယ်
အခုလို..သတိတရ နဲ့ …လာေ၇ာက် အားပေး ခ့စား လို့ .
အန်တီ အေး ကိုလည်း…
လင်းတ ငှက် တွေကို..ဠ နဲ့ ရေးလို့ ..ရ မရ သေချာ မသိသေးလို့ ။
မြန်မာ စာ သတ်ပုံကျမ်းထဲမှတော့..လင်းတ လို့ပဲ… တွေ့ မိတယ်လေ ။
အလက်ဆင်းရေ ဖတ်ရင်းနဲ့ အမေ့ကိုသတိရတယ် အစ်မရွှေကြည်အမေကလေ မိသားစုမှာ ယောက်ျားနဲ့သားသမီးတွေ မကြိုက်လို့မစားတဲ့ဟင်းဆိုသူကအကုန်ကြိုက် ငယ်တုန်းကနားမလည်ဘူး အသက်လေးရလာတော့မှသိလာတယ် အဲတော့ အမေ့ထဲကိုကောင်းနိုးရာရာလေးတွေထည့်ပေးပြီး အစ်မသိပ်မကြိုက်တာတွေလည်းအစ်မ စားတတ်လာတယ် အမေနဲ့မျှဝေခံစားပေးချင်တာက ရင်ထဲကစေတနာပါ။
ကြက်သားဆို အဖေ့ပန်းကန်ထဲကို အဖေကြိုက်တတ်တာလေးကို အရင်ဦးချတာ။ ပုစွန်ဆိုလည်းကြီးတဲ့အကောင်မှာ အဖေက အကောင်းကြိုက်တယ်လေ။ အမေက လည်ချောင်းတို့ အတောင်ပံတို့စားတာ။ ငယ်ငယ်ကအစ်မကအရေပြားမစားဘူး သူကယူစားပေးတယ်အရေခွံကိုခွာပြီးတော့ နောက်အစ်မအမေနဲ့စားရင် ကြိုက်သလိုပဲစားပြလိုက်တယ် အခုကြိုက်သွားပြီးဆိုပြီးတော့လေ။ အလင်းဆက်တို့ သားအမိရဲ့ စေတနာမေတ္တာတွေကိုမြင်လိုက်ရတော့ ပီတိဖြစ်ရတယ် မင်းအမေလည်းကံကောင်းသလို မင်းလည်းကံကောင်းတာပေါ့ ဒီလိုသား ဒီလိုအမေတွေ့ဆုံခွင့်ရတာ သားလိမ္မာနဲ့ မိခင်ကောင်းပေါ့။ ကိုယ်ချင်းစာတရားနဲ့ မေတ္တာတရားချမ်းသာတဲ့မိသားစုလေးပါ အလင်းဆက်ရေ။
ဖတ်ရှု ခံစားပေးလို့ကျေးဇူးနော် ။
ဂဇက်ပေါ်မှာ.အကြာကြီး.ပျောက်ပျောက် မသွားပါနဲ့ ဂျ ။
လူတိုင်းနီးပါး ဟန်ဆောင်ကြတယ်ပြောလို့ရမလားသိဘူးနော အားလုံးတော့ဟုတ်ဘူးပေါ့
ကျုပ်ငယ်ငယ်က ကျုပ်အမေရဲ့ခေါင်းအုံးအောက်တို့ ဆန်အိုးထဲမှာတို့ ဝှက်ထားတဲ့
ပိုက်ဆံတို့ ရွှေတိုရွှေစလေးတွေတို့ကို ခိုးဘူးတယ်
ငဇော်ဂျီ ငါ့ဟာတွေပျောက်ပြန်ဘီ နင်ယူသလား
ကျုပ်အရက်သောက်တတ်တဲ့အရွယ်တွေဆို ဇာတ်ပွဲတွေကပြန်လာရင် အဘိုးကြီးအဖွားကြီးတွေမေးတယ်
( ကျေးဇူးတော့အတော်တင်မိသား လိမ်ခဲ့တာတွေကို ဟန်ဆောင်တယ်ဆိုပြီးဝိနည်းရှောင်လို့ရလို့ပါ )
အရက်တွေ မသောက်ပါနဲ့ တော့ဂျာ..တစ်ယောက်ထဲ..
သားကို ပါ..ခေါ် ဦး.လို့ .ပြော မလို့…
အဟိ် အဟိ ဟိဟိ
ကိုအလင်းဆက်ရေ………….. ကိုအလင်းဆက်ပြောတဲ့ ဟန်ဆောင်မှုမျိုး ငြိမ်းတို့မိသားစုမှာလည်း ရှိပါတယ်။ ငြိမ်းတို့လည်း မရှိတဲ့မိသားစုပဲမို့ တစ်ခုခုဆို ဝေမျှပြီး သုံးစွဲလုပ်ကိုင်ရပါတယ်။ မလောက်ငတဲ့အခါတိုင်း မေမေကအမြဲတမ်း အနစ်နာခံနေကြပါ။ (ဖေဖေကတော့ အဝေးရောက်နေတာများတာမို့ ထည့်တော့မပြောတော့ပါဘူး။ အမှန်တော့ ဖေဖေလည်း အတူတူပါပဲ။) “မေမေ မကြိုက်လို့ မစားတော့ဘူး။” “မေမေ မလိုလို့ မ၀ယ်တော့ဘူး။” “မေမေ မလိုချင်ပါဘူးကွယ်” ဆိုတာမျိုးကိုပဲ အမြဲတမ်းလိုလို ကြားနေရတာပါ။ အခုနောက်ပိုင်းတော့ အဲဒီ့အသံမကြားခင် စားစရာဆိုလည်း ပါးစပ်ထဲ အတင်းခွံ့၊ လိုအပ်တာဆိုလည်း မမေးတော့ဘူး၊ အရင်ဝယ်လာပြီးပေး နဲ့ အတင်းကို ဇွတ်လုပ်တတ်တဲ့အကျင့်တစ်ခုရလာပါပြီ။ အဲလိုဇွတ်လုပ်လိုက်လို့ အဆူခံရတဲ့ အခါတွေရှိပေမယ့်လည်း မေမေပီတိဖြစ်သွားတာ၊ ကျေနပ်သွားတာကို သိလိုက်ရတဲ့အတွက် ၀မ်းသာနေမိတယ် ကိုအလင်းဆက်ရေ………………….
comment ပေးရင်း ကိုယ့်အကြောင်းတွေချည်းပဲ ပြောနေမိတယ်။ အဖြစ်ချင်းတူနေလို့ပါ……
အခုလို.. ၀င်ရောက် ဆွေးနွေး သွားတာလေး.ကို..
သိပ် မကျန်တော့တဲ့ …အက္ခရာ ခရီးစဉ်တလျှောက်လည်း..လိုက်ခဲ့ပါဥင်္ီး…လို့ ။
မိဘနဲ့သားသမီးကြားက မေတ္တာကြောင့် အဖြူရောင် ဟန်ဆောင်ခြင်းတွေ ဖြစ်လာတာပေါ့…
ဟန်ဆောင်တာကို ဟန်ဆောင်တာမှန်းသိတော့ ပိုခံစားရတာပေါ့..
မွန်မွန်သာဆို တစ်ဇွန်းလောက်ဝင်စားပြီးတော့မှ မအီမလည်ပုံစံလေးလုပ်ပြပြီး မစားတော့ဘဲ နေလိုက်မှာ..
မွန်မလေး လုံလုံ ရေ..( ကိုယ့် နာမည်လည်.း..ပြောင်းပြန်ဆိုတော့… )
ဟုတ်တယ်နော်..။ အဲဒီလို.. တစ်ဇွန်းလောက် ၀င်စားပြီးမှ..
မစားချင်သလို လုပ်တာ..ပို ပ်ိရိမှာ.။
နည်းလမ်း တစ်ခု ရပြီ ။:)
ဆင်းရဲခြင်းဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ မိသားစုကြားမှာ..ရှိနေသေးသ၍ …
အဲဒီလို ဟန်ဆောင်ခြင်းတွေ… ပိရိသထက် ပိရိအောင်..ကြိုးစား..
လူ..ဆင်းရဲ တဲ့ ဘ၀ မှာ..
စိတ်ဓါတ်နဲ့အတွေးအခေါ်.. မဆင်းရဲရလေအောင်..
တတ်နိုင်သမျှ..လေ့လာ စူးစမ်းရင်း….ပေါ့ ။
အခုလို..မမေ့မလျော့ လာရောက် ဖတ်ရှု.. ခံစားပေးတဲ့ 
မွန်မလေး လုံလုံ…ကို..ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..နော့ ။
သူဂျီးမင်း အုခိုင်..တို့ ပါ ။
သားသား ကို ကွန်မန့် Edit လုပ်ခွင့်လေး..ပေးတဲ့ အတွက်..ပါ ။
အဆင်ပြေပြေ Edit လုပ်လို့ ရတော့…
နေ့ စဉ်မနက်မိုးလင်းတာနဲ့၊ သွားနေကြလာနေကြ ဝန်းကျင်မှာ ဟန်ဆောင်မျက်နှာဖုံးနဲ့ ရှင်သန်နေခဲ့တာ ကျွမ်းကျင်နေခဲ့ပေါ့ ။ ဒါပေသည့် ရံဖန်ရံခါ ခဏကရတဲ့ဇါတ်ခုံမျိုးမှာတော့ သရုပ်ဆောင်မပိုင်ချင်ဘူး
အဖြူရောင် ဟန်ဆောင်ခြင်းတွေ .ဆိုတာလည်း… သရုပ်ဆောင် မပိုင်နိုင်လေ…
ပို..ရင်နာစရာ ကောင်းလေ..ပဲ..နော် ။
ချီတက်လာလိုက်တာ ` ဟ´ တောင်ရောက်လာပြီကိုး..
အဲဒီ့လို ချစ်ခြင်းနဲ့ ဟန်ဆောင်ရတာတွေက ဟန်ဆောင်နေသူကို စိတ်မဆိုးရက်ပဲ ရင်နာ ကြည်နူးရတဲ့ ခံစားမှုကိုပေးတယ်နော်… ကာလတွေဘယ်လောက်ကြာကြာ၊ ဘယ်အချိန်မှာ ပြန်တွေးတွေး မလျော့တဲ့ ခံစားမှု ကိုရနေမှာမျိုးပဲ…
ဟုတ်ပါ့ နှင်းဆီ စိမ်းလေးရေ…
ဟ = အပြီးမှာ..
ဘာရေးရမှန်းမသိလို့ … ရပ်နေသေးတယ် ။ မကြာမီ.တော့..လာမည်.ေ.ပါ့ ။
အစဉ်မပြတ်… ခံစား..အားပေးလာတဲ့ ..အတွက်..
ကို အလင်းဆက်ကြီး လူပျိုကြီး ဖြစ်နေတာ ဒါကြောင့်ကိုး.. ။ မြန်မာပြည်က မိန်းကလေး အများစုက.. အမေချစ်တဲ့ သားဆို ကြောက်ကြတယ်ဗျ……။ ဘာဖြစ်လို့မှန်းကို မသိဘူး…..။ ရွာသူ အစ်မ ၊ အန်တီများ ရှင်းပြကြပါဦး..
ဒီလူပျို ကြီး ဖြစ်နေတာလေးပဲ..ပြောနေကြတာပဲ. ။
နောက်နေ့က စပြီး.မိန်းမ ရအောင်ကြိုးစားတော့မယ် ။။
မိခင်တစ်ယောက်ရဲ့ မိသားစု အတွက်အနစ်နာခံလေ့ ရှိပုံလေးကို ဖွဲ့ထားတဲ့ လေးပါ။
အကြောင်းအရာကတော့ မိခင်ကောင်း တိုင်းမှာ ရှိတဲ့ စိတ်ဓာတ် အကြောင်း ဘဲမို့ သိပ်ပြီးမထူးဆန်းပေမဲ့ ကွဲပြားတဲ့ တင်ပြ ပုံလေးနဲ့ ဝင်ရောက် ဆွေးနွေးသူတွေ ကို အရေးတယူထား အချိန်ပေးပြီး ပြန်လည် ဆွေးနွေး ထားတာမို့ အကြိုက်ဆုံး အဖြစ်ရွေးလိုက် ပါတယ်။
အမေမစားရတဲ့ အစာကို ကိုယ်လဲ မစားချင် တာကြောင့်
မိသားစုအားလုံး မစားရမဲ့ အတူတူ အားလုံးညီတူညီမျှ စားရမဲ့ အစာကို ချက်ကျွေး လိုက်တာ မကောင်းပေဘူးလား လို့ အမေ တွေကို အကြံပြုသင့်/ မသင့် စဉ်းစားနေမိ စေအောင် အတွေးများ ဆက်ပေးနိုင်တဲ့ Post လေးမို့လဲ ဖြစ်ပါတယ်။။